Liverpool oo iska sii wadata guulaheeda xiriirka ah, kaddib markii ay ka adkaatay Norwich City… +SAWIRRO – Gool FM
Liverpool oo iska sii wadata guulaheeda xiriirka ah, kaddib markii ay ka adkaatay Norwich City… +SAWIRRO
(England) 15 Feb 2020. Liverpool ayaa iska sii wadata guulaheeda xiriirka ah ee horyaalka, kaddib markii ay kaga adkaatay Norwich City 0-1, ciyaar ka tirsaneyd kulamada 26-aad ee horyaalka horyaalka Premier League.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray bar-bardhac 0-0 ah ay isku dhaafi waayeen labada kooxood.
Daqiiqadii 78-aad kooxda martida aheyd ee Liverpool ayaa hoggaanka u qabatay dheesha waxaana 0-1 ka dhigay Sadio Mane, waxaana goolkan ka caawiyay saaxiibkiis Jordan Henderson.
Ugu dambeyntii dheesha ayaa waxay ku soo dhamaatay 0-1 ay ku adkaatay kooxda martida aheyd ee Liverpool, waxayna haatan 25 dhibcood kaga hoggaaminayaan horyaalka Premier League naadiga booska labaad ku jirta ee Man City.
Quique Setién oo dhaleeceeyay garsoorka kaddib guushii ay ka gaareen kooxda Getafe
Horudhac: Arsenal vs Newcastle United… (Wax waliba oo aad doonayso inaad ka ogaato kulanka caawa ka dhacaya Emirates)